Miverina ny tsaho, ny iPhone 13 dia hanomboka ny seho an-tsary | Vaovao IPhone
Fantatrao izay tianay tsaho, ary io dia isan-taona no mitranga ny zavatra mitovy, raha hitantsika ny ho fizotran'ny rafitra fiasa manaraka ho an'ny fitaovana finday Apple, ary koa lisitra tsaho be dia be izay mampianatra antsika izay azontsika jerena amin'ny fitaovana Apple manaraka, indrindra rehefa miresaka momba ny mety ho endrik'ilay iPhone manaraka. Miverina miaraka amina tsaho taloha isika ankehitriny, ary isan-taona dia misy ny firesahana ny amin'ny mety hisian'izany ny iPhone manaraka dia manana ny fahaizana manana efijery mandrakariva noho ny haitao OLED. Miverena amin-kery izao ... Vakio hatrany fa omenay anao ny pitsopitsony rehetra.
Marina na tsia, amin'ity indray mitoraka ity avy amin'i Mark Gurman avy amin'ny Bloomberg. Toa Apple no naniraka ny mpamatsy azy hanomboka famokarana iPhones vaovao 90 tapitrisa amin'ity fararano ity. IPhone vaovao izay mety hanana ny fahitana ny efijery hatrany rehefa mitranga amin'ny Apple Watch. Fampisehoana iray azo atao noho ny fanjifana fampiasàna ny efijery OLED ary izany Io dia hahafahantsika mahita ny famataranandro, sy ny fampandrenesana (na widget??) Eo amin'ny efijery misy antsika foana na dia mihidy aza ilay fitaovana.
Manantena izahay fa hisy mpitrandraka A15 haingana kokoa, toerana kely kokoa, efijery vaovao hanatsara ny androm-piainany ary mety hisy maodely tsy miovaova mitovy amin'ny Apple Watch ary ny tahan'ny havaozina 120Hz sy ny fanavaozana ny haavon'ny fakan-tsary izay hihatsara. firaketana
Tena na tsia fantatrao, tsy maintsy miandry roa volana eo ho eo isika (na latsaka) hahitantsika izay hatairan'ireo tovolahy avy ao Cupertino aminay. Mihasarotra hatrany ny fandefasana vaovao ary azo antoka fa ny iPhone 13 vaovao dia natomboka miaraka amin'ireo vaovao kely (na lehibe) ireo. Ny efijery mandrakariva dia tsaho foana ary heveriko fa hiafara amin'ny famoahana an'ity karazana efijery ity i Apple izay ho fiovana lehibe rehefa mahita vaovao misimisy kokoa amin'ny efijery hidin-trano. Ary ho anao, Ahoana ny hevitrao amin'ny mety hisian'ny efijery mandrakariva?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » Miverina ny tsaho, ny iPhone 13 no hanomboka ny seho an-tsary mandrakariva
Ny kopian'ny AirPods dia mandany vola be amin'i Apple
Ny sary voalohany an'ny bateria MagSafe "niraikitra" tamin'ny iPhone 12